Industry News Manufacturers & Suppliers | China News Industry Factory
Phenibut no ampiasaina ao amin'ny Rosia ho toy ny zava-mahadomelina ny fanafody hitsaboana ny aretina isan-karazany, anisan'izany ny fanahiana, ny fahaketrahana, asthenia, mahita tory, alkaolisma, adin-tsaina posttraumatic fikorontanana, Niakanakam-piteny, ary vestibular disorders.In maro ny faritra hafa amin'izao tontolo izao, phenibut tsy nankatoavina ho an'ny fampiasana pitsaboana, ny ... Lire la suite »
HTA dia phenolic iombonana. Hydroxytyrosol base no matetika indrindra ao amin'ny oliva koa ny acetate plant.The hydroxytyrosol mitombo tahaka ny bioavailability. Hydroxytyrosol dia iray amin'ireo mahery indrindra finday fanampin-tsakafo ara-pahasalamana misy. Soa fanampiny ahitana vatana sy ny fifehezan suppleme ... Lire la suite »
Curcumol dia madio monomer mitoka-monina avy any amin'ny antitumor Rhizoma Curcumaeis asa. Tsy anti-milaza zavatra sy antiproliferative mpandraharaha. Dia mampihena LPS-mianatra NO famokarana amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra mRNA hisakanana iNOS. Lire la suite »
Isoxepac dia efa mandroso kafa ny Olopatadine, Olopatadine dia antihistamine (ary koa ny anticholinergic sy ny andry tokana sela stabilizer), namidy ho levitra maso indray mitete vokarina avy Alcon tamin'ny iray amin'ireo telo hery: 0,7% vahaolana na Pazeo any Etazonia, 0.2% vahaolana na Pataday (kal koa ... Lire la suite »